Miverina Amin’ny Firaisana Sovietika? Lazain’ny Mpitsikera fa Mametraka ny Fanjakana ho Ambonin’ny Zo ny Volavolan-Dalàna Vaovao ao Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2017 5:11 GMT
Josef Stalin sy Kliment Voroshilov tamin'ny taona 1935. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Nihozongozona ny media sosialy tao Kazakhstan, Sovietika taloha, tamin'ity herinandro ity noho ny vaovao avy ao amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana izay eo am-pandrafetana volavolan-dalàna mety ahazoan'ny Kazakh sazy an-tranomaizina mandra-pahafaty, sazy ho faty na fanesorana ny maha olom-pirenena noho ny “fanohintohinana ny fitoniam-pirenena sy ny tombontsoam-pirenena lehibe eo amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina”.
Taorian'ny fanoherana, hita fa nanaisotra ny volavolan-dalàna ny fanjakana, saingy vitsy ireo fanovana tamin'ny fehezan-dalàna famaizana tokony hiteraka fahatokisana fa mizotra mankany amin'ny lalana demaokratika i Kazakhstan.
Araka ny fanovana lalàmpanorenana vao haingana, izay olom-pirenena rehetra tafiditra amin'ny fampihorohoroana na ady mitam-piadiana dia mety ho esorina aminy ny maha olom-pirenena. Eo am-panavaozana ankehitriny ny lalàna momba ny heloka bevava ao an-toerana mba hifanaraka amin'ny lalàmpanorenana vaovao.
Ny tena mampiadihevitra amin'ny fanovàna tamin'ny fehezan-dalàna famaizana natolotry ny minisiteran'ny fitsarana dia ny andinin-dalàna faha-184-1, izay milaza fa “ny fanohintohinana goavana ny tombontsoam-pirenena lehibe sy ny fandrahonana ny fitoniam-pirenena sy ny fiarahamonina” dia azo saziana ho faty, sazy an-tranomaizina mandra-pahafaty sy fanesorana ny maha olom-pirenena.
Afaka manondro olona mamela ny fakony ao ivelan'ny varavaran'ny tranon'ny fahavalon'ny tombontsoam-pirenena ve isika na manaisotra ny maha olom-pirenena azy ireo?
Nirongatra ny fanehoan-kevitra avy amin'ny vahoaka rehefa nandefa ny volavolan-dalàna tao amin'ny Facebook ilay mpisolovava Kazakh, Jokhar Utebekov.
Namazivazy ny mpiasan'ny Minisiteran'ny Fitsarana ihany koa i Utebekov noho ity minisitera ity nilaza fa tsy afaka mahazo tombontsoa ara-tsosialy” amin'ny maha olom-pirenena Kazakh intsony ireo nesorina ny maha olom-pirenena azy.
“Tombontsoa ara-tsosialy inona no ambarany? Matahotra ve ianao ho esorina ny tombontsoa maha olom-pirenena Kazakh anao?» hoy izy nanoratra tao amin'ny pejiny, manasongadina ny zo voafetra ananan'ny olon-tsotra Kazakhstany ao amin'ny fanjakana Aziatika Afovoany tsirefesimandidy.
Maro ireo nisarika ny saina mikasika ny fanehoana ny andininy faha-184-1 amin'ny endrika Sovietika, mitovy fanehoana “Fahavalom-pirenena” (Враг народа) nandritra ny horohoro Stalinista izay nahitana fitifirana faobe natao hanampanem-bava ny mpanohitra.
Nihevitra kosa ireo mpisera Facebook hafa fa ny fanovana dia nikendry manokana an'i Mukhtar Ablyazov, mpanohitra masiaka an-tsesitany nandritra ny fitondran'ny Filoha Nursultan Nazarbayev maharitra ela, noampangaina ho manodikodim-bola i Mukhtar ary tsaraina ao Kazakhstan ankehitriny, fitsarana izay tsy atrehiny.
Nosakanan'ny Vaomieram–panjakana Frantsay ny fampodiana an'i Ablyazov any Rosia tamin'ny Desambra 2016, nilaza fa misy ambadika politika ny raharaha.
Nanoratra tao amin'ny Facebook ilay mpikatroka Kazakh, Bakhytzhan Toregozhina :
Inona ny fanohintohinana mampidi-doza? Inona ireo tombontsoa lehibe? Ahoana no handrefesana ny fanohintohinana amin'ireo tombontsoa ireo? Mampidi-doza ho an'ny fitoniana ve ny fitsikerana ny governemanta?
Nilaza ilay mpanohitra hatramin'izay Sergey Duvanov fa ny fanagadrana, ny famonoana ho faty sy ny fanesorana ny maha olom-pirenena dia maneho fiverenana amin'ny vanim-potoana tsirefesimandidy Sovietika:
Ny Andininy faha 181-1 natolotry ny Minisiteran'ny Fitsarana dia mampatsiahy ahy ny andininy Stanilista faha-58 ka olona dimy hetsy mahery no voatifitra ho faty nandritra ny fitondrana Sovietika.
Taorian'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny media sosialy, nesorin'ny Ministeran'ny Fitsarana tao amin'ny tranonkalan'izy ireo ny volavolan-dalàna ary nikarakara fihaonana tamin'ireo mpanangom-baovao izy. Nandritra ny fihaonana tamin'ny 28 Martsa, nilaza ny Minisitra lefitry ny Fitsarana fa hasiam-panovana ny fanitsiana ny fehezan-dalàna famaizana.
Nanomboka tamin'izay, hita fa nesorina ny andininy manafintohina faha-184-1, taorian'ny vaovao malaza vao haingana nampilefitra ny manampahefana Kazakh noho ny tabataban'ny vahoaka.
Na izany aza, ny famelàna ny fanesorana ny maha olom-pirenena dia nampiana tao amin'ny andininy faha-174 efa misy (“fitarihana disadisa ara-tsosialy, ara-pivavahana sy manerana ny firenena”), izay lazain'ny maro fa manjavozavo mampidi-doza ny fehezanteny toy ny “manohintohina ny tombontsoa goavan'ny firenena sy ny fitonianan'ny fanjakana sy ny fiarahamonina “.
Rehefa dinihina tokoa, efa nampiasain'ny manampahefana hampanginana sy hanenjehana ireo mpikatroka mpanohitra ao Kazakhstan ny andininy faha-174 . Tamin'ny tranga iray toy izany, nogadraina nandritra ny fito taona sy tapany ny mpitarika ny antoko Alga mpanohitra tsy nisoratra anarana noho ny “fitarihana ady ara-tsosialy”. Tsy nisy intsony ny tena antoko mpanohitra ao Kazakhstan nanomboka teo.
Tokony ho fantatry ny vahoaka ny dikan-teny farany amin'ny fehezan-dalàna famaizana nasiam-panovàna aorian'ny 4 Aprily ary alefa any amin'ny filoha Nazarbayev mba hosoniaviny rehefa mahazo ny fankatoavan'ny parlemanta ao amin'ny firenena.